Umuntu namuhla uye zijwayele ngakho ukuba izinzuzo impucuko, ukuthi nje abakwazi ukucabanga ukuphila ngaphandle kwazo. Ikakhulukazi sihlobana ugesi. Uma endaweni lapho kungekho khona ugesi, asizizwa ukhululekile kakhulu.
Udinga usizo bangase Petrol Huter, has eziningi eziwusizo.
Inzuzo enhle yilona lizwe ukwakhiwa. Yebo, izindaba mayelana "yendabuko izinga German" kakade zonke kuhle ukhathele, kodwa hhayi kuleli cala. Ikhishwa iyunithi eJalimane (ongekho engaphansi amaShayina), ukulawula izinga nasenhlanganweni ihlangabezana nemingcele kuphawulwe kweyoku-100%.
Ngalezi ugesi, ngaphandle kwenkinga: ngisho ekuqaleni abandayo kwanele ukudonsa kumile eside isibambo izikhathi ezimbili noma ezintathu, ngemva kwalokho injini Siyaqiniseka ukusebenza. Engeza kuleli a lifetime eside, futhi uzoqaphela ukuthi lutho olungcono eside kaZuma noma kwesibaya siqu emgwaqeni ingakamiswa yasungulwa!
Ukuthenga ezinye imodeli Chinese, lokhu ipharamitha akakwazi qiniseka neze. Kodwa uphethiloli Huter DY3000l unika ncamashi 2,5 kW okuyinto kucacisiwe kule esifakiwe. Lokhu kubaluleke kakhulu uma usebenzisa wona ekhaya noma abanye ukukhiqizwa. Ukulahlekelwa ezibalulekile ekhaya Imishini ngenxa ukungafani amandla izici akusho ukwesabisa kwakho.
Kuyefana nasendleleni voltage. Ngeke dissemble: izinhlanga ngaphakathi 210-220 lapho, kodwa "waphulukisa" umane isimame. Nokho, iningi imishini kuwo neze akazange asabele.
Njengoba imikhiqizo yenkampani iyona ozithandayo futhi kuvamile ezweni lethu, izinkinga ne izingxenye ezisele ongeke uhlangabezana. Thenga kubo kungaba cishe kunoma iyiphi okukhethekile esitolo, okuyinto namuhla, ngisho nasemizini kulencane.
Hhayi ngaphandle amaphutha ayo. Omunye wabo umsindo. Cishe zonke likaphethiloli ugesi umsindo Huter kubonakale emsindweni ongaphezu kwama-ezingeni, okuyinto ezishiwo bhukwana imfundo. Njengoba sazi ukuthi banayo ukusebenzisa isikhathi eside, kufanele anakekele abanye soundproofing, kungenjalo izindlebe zakho bakhathele kakhulu.
Uma sikhuluma ngezinto ezincane, ngezinye izikhathi kunezindlela ukubuyekezwa ukusebenza hhayi ngempela lesifanele kukaphethiloli ezingeni geji.
Sikhishwe zonke izinzuzo ngenhla, lezi ukungapheleli ezincane ngeke sithathwe njenge isizathu hhayi ukuthenga likaphethiloli ugesi Huter. ukuthenga - lena inzuzo ngezimali! Ngisho izindleko kuqhathaniswa eliphezulu ukuthengwa ngeke ukuvikele ngokuphelele ukukhokhela ngokwayo kungakapheli izinyanga ezimbalwa kuphela.
Crab izinti eyayigcwele - futhi umane okumnandi